Igalari yepayipi ifoni evikela isimo sezulu isibe yidivayisi yokuxhumana ebaluleke kakhulu-Izindaba-Ningbo Joiwo Explosion proof Technology Co., LTD
Ucingo lwe-Pipe gallery sezulu seluyinto yokuxhumana ebaluleke kakhulu
ISIKHATHI: 2019-12-31 HITS: 43
Esimweni esivamile sokusebenza kwegalari, i igalari yezikhali ezimangele amanzi ifoni ibukeka iyithuluzi elikwazi ukuhanjiswa, kepha ngenxa yokulungiswa kwamapayipi ahlukahlukene kugalari, ukunakekelwa kwegalari uqobo, nezinye izizathu, igalari ayikho ukumbozwa kwezimpawu zamaselula ephaseji. Kufanele kube nenani elikhulu lochwepheshe ephaseji elingaphandle kokusebenza kanye nabasebenzi bokulungisa abazosebenza ephaseji. Ngakho-ke, uhlelo lokuxhumana olungaguquki lwephaseji lube ukuphela kokuxhumana kwangaphandle kwalaba basebenzi bephaseji besikhashana. Ucingo Uhlelo lwaba uhlelo lokuqinisekisa ukuxhumana ukuze baqedele umsebenzi wabo futhi banikeze ukusebenza kahle.Ningbo Joiwo baqedile inani elikhulu lephrojekthi ngempumelelo kugalari futhi banolwazi oluningi.Asikukhombise imininingwane yefoni yeGalari.
Okokuqala,Ukwakheka kohlelo lwefoni:
Ucingo lwephaseji lakhiwe ngohlelo oluphakathi lokuphatha olufakwe esikhungweni sokulawula kanye nesandiso (noma iyunithi elisizayo) elifakwe ephaseji. Uhlelo oluphakathi lokuphatha lakhiwe yiseva yohlelo, uphiko olulawulayo oluphakathi, indawo yokusebenza, ucingo oluphakathi nendawo kanye nombhobho wokusakaza neminye imishini yehadiwe kanye nesoftware yokulawula.
Okwesibili,Umsebenzi wefoni yegalari yepayipi:
1. Izingcingo ezingenayo nezingenayo ezingenamkhawulo: Uhlelo lungaqalisa izingcingo eziphakathi kwezandiso (noma abasizi) ngaphakathi kwephaseji, phakathi kwezandiso (noma abasizi) nendawo yokulawula, noma ngqo phakathi kwezandiso (noma abasizi) ngaphakathi kwephaseji. Sungula ukuxhumana ngocingo nabasebenzisi abangaphandle kwenethiwekhi yomphakathi (ukulawula izimvume zokuxhumana).
2. Umsebenzi wokusakaza ophakathi nendawo: Abaphathi besikhungo sokulawula bangashicilela ukusakazwa kwezwi kusandiso (noma umshini osizayo) nge-terminal yokusebenza, futhi bangakhetha ngokungekho emthethweni uhla olulawulwayo lokusakaza ngokuya ngezidingo.
3. Ukuqapha nokubeka imvume: Isikhungo singaqapha futhi sisethe imvume yokushayelwa kwanoma isiphi isandiso (noma ifoni esizayo). 4. Ukuzihlola nokuziphilisa: Uhlelo lunomsebenzi owodwa wendandatho yokuziphilisa ozimele, ongenza ukuzihlola kwinethiwekhi ye-fiber ring kanye nesandiso (isigqila) kusixhumanisi, futhi ungazelapha. Noma iyiphi indawo yokuqhekeka ayikuthinti ukusebenza okujwayelekile kohlelo.
5. Ukuqopha nokudlala: Uhlelo lungaqopha futhi luphinde lubuyise zonke izingcingo eziya enkabeni nasemigqeni engaphandle kanye nezingcingo ezingaphakathi kwephaseji.
6. Ukuvulwa kwembobo yedatha: Uhlelo lungahlinzeka ngolwazi lwalo lonke uhlelo lwamapayipi egalari oludingwa yipulatifomu yokuphatha ngokusebenzisa umthetho olandelwayo we-OPC noma we-UDP, ukubona ukwabiwa kolwazi, futhi kube nemisebenzi yezibalo zedatha yokuhlinzeka ukwesekwa kwabaphathi ..
Okwesithathu,Isandiso segalari yepayipi nesisebenzisi umsebenzi:
1. Isandiso segalari sinemisebenzi ejwayelekile yocingo nokusakaza.
2. ngomsebenzi ongenazandla.
3. ngomsebenzi wokuqinisekisa ukuqhuma.
4. Ifakwe i-alamu elizwakalayo nelibonwayo nedivayisi ye-alamu yenkinobho eyodwa ye-SOS, uma kwenzeka kuphuthumayo, inkinobho eyodwa ingakhuluma ngqo esikhungweni.
5. Ifakwe ithempelesha nomswakama inzwa yedivayisi, ingabambisana nesistimu ukuqedela ukuqoqwa kwedatha nokulayishwa kwezibalo.
6. Ngezinga lokuvikela le-IP67, lingacwiliswa manzi, linobufakazi bomswakama futhi limelana nokugqwala.
Ngokwanda kobude bephaseji nezinhlobo zamapayipi ezingena kulo mgudu, abasebenzi bephaseji besikhashana abaningi ngokwengeziwe bazobe besebenza kulo mgudu, futhi ukuncika kohlelo lokuphepha kwezokuxhumana ephaseji kuzoqina kakhulu. Uhlelo lwezingcingo oluyiphaseji akuyona indlela yokuxhumana engaguquguquki ongayikhetha, noma uhlelo lokuthumela izingcingo oluphuthumayo, kepha uhlelo olubalulekile lokuqinisekisa ukuxhumana oluhlobene nokuphathwa nokusebenza kahle kwephaseji.
I-Ningbo Joiwo ivikela ukuqhuma ezikhethekile ngocingo lwezimboni njenge-IP noma uhlelo lwefoni lwe-analog, ucingo olungenayo isimo sezulu, ucingo oluqhuma ukuqhuma, ucingo olunobufakazi bokucekela phansi, izingcingo zamahhala, ucingo lomphakathi kanye nocingo lwasejele.Singanikeza isisombululo sohlelo lwe-PBX esingasetshenziselwa uthuli oluyingozi nomoya wegesi, i-petrochemical imboni, Umhubhe, imetro, ujantshi, ijubane, olwandle, umkhumbi, ulwandle, okwami, isitshalo samandla, ibhuloho, ihhotela, isibhedlela, ijele.
Yini umsebenzi we-IP Public Address System？
Luyini ucingo lwe-Inmate & Prison & Jail system?